ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံလွှာရှုံးနိမ့် Appeal | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံလွှာရှုံးနိမ့် Appeal
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံလွှာရှုံးနိမ့် Appeal
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 11, 2010 in Myanma News |9comments
မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကြာသာပတေးနေ့က နောက်ဆုံး တရားရင်ဆိုင်မှုမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူမကိုထောက်ခံသူများက သူမ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ အကောင်းမြင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၆၅နှစ်ရှိ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲပြီး တပတ်အကြာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။ စစ်အစိုးရ က သူမလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ အတည်မပြုပေသေးမဲ့ တာဝန်ရှိသူများဟာ လိုအပ်တဲ့ လုံခြုံရေး ပြင်ဆင်မှုတွေကို လာမဲ့သီတင်းပတ်အတွက် ပြုလုပ်နေတယ်လို့ တိတ်တဆိတ် ပြောကြားကြပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့အငယ်ဆုံးသား ကင်အဲရစ်ဟာ ဒီတပတ်အစောပိုင်းက မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာရရှိပြီး ဖြစ်လို့ ၁၀နှစ်အတွင်း သူ့အမေကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။ အဲရစ်ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျောက်ထားချက်ကို နှစ်ပေါင်းများကထဲက ကြိမ်ဖန်များစွာ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါ်စုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁နှစ်အတွင်း ၁၅နှစ်မျှ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ် (ဒါတောင် ငမိုက်သား အချို့က ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ဖြုတ်ဥနှောက်နဲ့ သခင်အားရကျွန်ပါးဝ ပြောသေးတယ်၊ ဤကား စကားချပ်။) ဒါပေမဲ့ ဩဂုတ်လ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ ဘယ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးနဲ့မှ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း မခံခဲ့ရဘဲ သူမနေအိမ်ကို ရေကူးဝင်ရောက်လာတဲ့ အမေရိကန် လူမျိုးတဦးကို လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကနဦး အကျယ်ချုပ် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ နောက်ထပ်၁၈လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါ်စုဟာ အရင်အယူခံနှစ်ခု ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအယူခံကို ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ မြို့တော် နေပြည်တော်ကျပ်ပြေးရှိ အထူးအယူခံတရားရုံးမှာ တင်ခဲ့တာပါ။ တရားရုံးဆုံးဖြက်ချက်ကို ကြာသာပတေးနေ့တုန်းက အများပြည်သူ အသိပေးကြေငြာ သင်ပုန်းမှာ ကပ်ထားခဲ့ပြီး ဖြေရှင်းချက် တစုံတရာ မပေးဘဲ ပယ်ချလိုက်သည်လိုသာ ဆိုထားပါတယ်။ တရားရုံးက ကျနော်တို့အယူခံကို ငြင်းပယ်လိုက်ပြီး အရင်တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လုံးဝမှားယွင်းပြီး နိုင်ငံ့တရားစီရင်ရေး အခြေအနေကို ညွှန်ပြရာရောက်တယ်လို့ ရှေ့နေဦးညဏ်ဝင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အများက မတရားမှုနဲ့ မဲလိမ်မှုတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ အခုတရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ မပြိးသတ်ရသေးတဲ့ ရလဒ်များအရ စစ်အစိုးရ လိုလားတဲ့ပါတီဟာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ကြတဲ့အတိုင်း တခဲနက်အောင်ပွဲခံဖို့ တာဆူနေပါပြီ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အပါဝင် စစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များဟာ ပါလီမန်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဲလိမ်မှု စွပ်စွဲချက်တွေကို စုံစမ်းဖို့ကော်မတီတခု ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊ သူမဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာတဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲ မဲခိုးလိမ်ညာမှုများကို ကူညီစုံစမ်းပေးသွားမယ်လို့ အဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးညဏ်ဝင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မပါနိုင်အောင်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ သေချာစီံမံ တာဆီးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ပါတီဟာ တရားမျှတမှုရှိမှာ မဟုတ်လို့ ယူဆလို့ မဲပေးပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီ် ရပ်တည်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပေမဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအသွင်နဲ့ အလွန်တရာ လူကြိုက်များရေပန်းစား ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။
သမ္မတ အိုဘားမား အပါအဝင် အနောက်တိုင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများက အနှစ်၂၀အတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ် တရားမျှတခြင်း ကင်းမဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကို ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်တွေဟာ စစ်အစိုးရကို အရှက်ရစေတာမို့ အရင်လိုပဲ စစ်တပ်အနေနဲ့ သူမကို ပြန်လည်ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်မဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင် ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ ဌာနချုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သူမရုံးခန်းဟောင်းကို သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေကြတဲ့ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ စည်ကားနေပါတယ်။ အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဦးညဏ်ဝင်းကတော့ သူမလွတ်မြောက်မယ်လို့တထစ်ချ ယုံကြည်နေပါတယ်။ သူမကို ချုပ်နှောင်ထားတာကို ဆက်သက်တမ်းတိုးဖို့ ဥပဒေမရှိတာကြောင့် သူမကိုလွှတ်ပေးရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမလွတ်မြောက်ဖို့ ခြွင်းချက်နဲ့ သတ်မှတ်ချက်မျိုးကိုမှ ဒေါ်စုကလက်ခခံဘူးလို့ ဦးညဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ အရင်က စစ်တပ်ဟာ သူမအပေါ် လူထုထောက်ခံမှုတွေကြောင့် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အင်အားကြီးထွားလာမှာ ကြောက်လို့ သူမကို ရန်ကုန်မြို့ပြင်ကို ခရီးထွက်ခွင့် ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
YANGON, Myanmar – Myanmar’s democracy icon Aung San Suu Kyi suffered her latest courtroom loss Thursday but supporters and close aides remained optimistic that she will soon be granted freedom from house arrest in the military-ruled country.
The 65-year-old Nobel Peace Prize winner is due to complete her sentence on Saturday, nearlyaweek after the country held elections that excluded Suu Kyi because and were widely criticized asasham. The junta has not confirmed that she will be set free but government officials have quietly said they are making “necessary security preparations” for this weekend.
The youngest of Suu Kyi’s two sons, Kim Aris, also was grantedaMyanmar visa earlier this week in an indication that he will be allowed to see his mother for the first time in 10 years. Aris lives in Britain and has repeatedly been denied visas for years.
The decision came just days after Myanmar’s first election in 20 years, which have been widely criticized as unfair and rampant with fraud.
Suu Kyi’s National League for Democracy has establishedacommittee to probe allegations of fraud in the polls, said Nyan Win, who is alsoaspokesman for the group.
Independent observers and Western leaders including President Barack Obama have said Sunday’s election — the first in two decades — was neither free nor fair.
Suu Kyi’s intention to re-enter the political fray, especially inamanner that would embarrass the junta, poses the sort of challenge that the military has met in the past by locking her up again.
The NLD’s dilapidated headquarters in Yangon was bustling Wednesday with party members tidying up Suu Kyi’s old office.
“She has to be freed as there is no law under which her detention can be extended,” said Nyan Win. But he added Suu Kyi would not accept her release if there were any conditions attached to her freedom. In the past, the military has refused to let her travel out of Yangon, fearing her popularity could encourage dissent.
လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေကြတာပဲ…လွန်လွန်အားကြီးတယ်….ဘာလို့များသူတို့က ခုထိကောင်းစားနေရတာလဲ မသိဘူး….။
That is fool..what ‘s wrong with ….That ‘s not fair and justice enough…
ဒါနဲ့ တခု စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာလေးက.. အယူခံလွှာ ပါယ်ခံရတာ လွတ်ရက်စိခါနီး မိုလို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုပြီါ် ပါယ်ချတာများလား.. ထင်တာ မေးကြည့်တာ
တစ်ကယ်လွတ်တာလား ။ သတင်းလင့်လေးရှိရင်ပေးပါဦး ။ မင်္ဂလာသတင်းလေးဖတ်ချင်လို့ပါ ။
Better delete this post since daw su has free now.thanks.